Intee in le'eg ayaa laga soo saaraa khadka tooska ah ee 60 ilbiriqsiyo?
Talaado, Juun 6, 2017 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Waxaa laga yaabaa inaad dareentay xoogaa nacas ah qoraalkaygii dhawayd. In kasta oo daabacaadda maalin kasta ay noqotay qayb ka mid ah DNA-kayga sannadihii la soo dhaafay, sidoo kale waxaa laygu xujeynayaa hormarinta goobta iyo bixinta sifooyin badan iyo ka badan. Shalay, tusaale ahaan, waxaan sii waday mashruuc lagu dhexgalinayo talooyinka ku saabsan warqadda cad ee goobta ku habboon. Waa mashruuc aan xarigga ka jaray sanad ka hor sidaa darteedna waxaan qaatay waqtigayga qorista waxaanan u beddelay koodh
Maxay yihiin Noocyada Mawduucyada Ugu Badan ee Khadka Tooska ah iyo Moobaylku?
Jimco, Oktoobar 31, 2014 Jimco, Oktoobar 31, 2014 Douglas Karr
Suuqgeeyayaasha mawduucyada ah ayaa laga yaabaa inay rabaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan falanqeyntii ugu dambeysay ee AddThis ee ku lug lahaanshaha waxyaabaha ku saabsan miisaska iyo qalabka moobiilka. Falanqaynta shirkadda 'Q3' waxay soo bandhigtay isbeddello iyo dabeecado xiiso leh markay tahay waxyaabaha macaamiisha ay inta badan ku mashquulsan yihiin, halka ay ku hawlan yihiin, iyo waqtiga maalinta ay u badan tahay inay daawan doonaan. Sida laga soo xigtay AddThis, qaybaha nuxurka ee arkay ka-qaybgalka ugu badan ee moobiilku waxay ahaayeen qoysnimo iyo waalidnimo leh waxyaabaha la xiriira uurka
Khamiista, Sebtember 4, 2014 Khamiista, Sebtember 4, 2014 Douglas Karr
Dr. Jim Barry oo ka tirsan blog-ka Edu-Tainment Suuq-geynta Waxyaabaha Bulsheed ayaa isku duba riday liis ay ku qoran yihiin kuwa saamaynta ku leh baraha bulshada ee ugu sarreeya (adiguna runti adigaa leh!). Dhakhtarka wanaagsan wuxuu ku qoray qoraal xiiso leh, faahfaahsan oo ku saabsan 4 taariikheed ee saameynayaashan, isagoo sharraxaya astaamaha iyo noocyada saameynta ay ku leeyihiin warshadaha, oo ay ku jiraan: Aqoonyahanno - waxay siiyaan caawimaad iyo aragti Tababarayaasha - ku lug leh oo kaa caawiya (waxaad ka heli doontaa Halkan maahee!) Madadaaliyayaashu - ku hawlan iyo
Sidee Internetku U Ekaan Doonaa Qarniga Xiga?
Axad, Juun 13, 2014 Sabtida, Juun 12, 2014 Douglas Karr
Inaan ka fikiro in caruurtaydu ay ku korayaan da 'yar uu internetku had iyo jeer halkaan yaalo waa wax aad loola yaabo. Xaqiiqda ah inaan ka soo dhaqaaqnay garaacid fudud oo aan ku haysanno daraasiin qalab guryaheena ah oo isku xiran, duuban, oo naga caawinaya inaan maalin walba wadno waa cajiib. Inaan ka fikiro 100 sano kadib waa wax ka fog aragtidayda. Qaraxa mobilada iyo qalabkeenu marba marka ka dambeysa sii xoogaysanaya, waxaan qiyaasi karaa uun muujintaas
Suuqgeyntu Dhab ahaan Ma Is Beddelaysaa?
Sabtida, Juun 5, 2014 Douglas Karr
Xogtani waxay si wada jir ah u soo jiidanaysaa natiijooyin aad u wanaagsan oo ka yimid Accenture's CMO Insights ee 2014, laakiin waxaan ka baqayaa inay ku furmayso cinwaan riwaayad ah oo si qaldan loo turjumay. Waxay sheegaysaa: 78% Jawaab bixiyaasha inay oggol yihiin in suuq geynta laga filayo inuu isbedel xagjir ah ku yimaado 5ta sano ee soo socota. Si xushmad leh, waan diidanahay. Suuqgeynta ayaa isbeddeleysa oo dhijitaalka ayaa safka hore kaga jirta xeeladaha badankood. Miisaaniyadu way isbedelayaan, xeeladaha bulshada iyo waxyaabaha la xidhiidha ayaa cirka isku sii shareeray, qalabkiina wuu sii kordhayaa